Wasaarada Kalluumaysiga Somaliland Oo Soo Bandhigtay Qorshe Cusub Oo Ay Ku Caawinayso Kalluumaysatadda Dalka | Salaan Media
Wasaarada Kalluumaysiga Somaliland Oo Soo Bandhigtay Qorshe Cusub Oo Ay Ku Caawinayso Kalluumaysatadda Dalka
Aug 15,2013 Hargaysa(SM) Wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka Badda Somaliland, ayaa maanta soo bandhigtay siyaabaha kala duwan ee loo dhiiri-gelin karo maalgashi lagu sameeyo kheyraadka badda, halka sidoo kalena ay wasaaraddu digniin adag u dirtay maraakiibta badda xaalufisa ee sharci darrada ku kalluumaysanaysa.
Agaasimaha Guud ee wasaaradda Md. Maxamed Cilmi Aadan (Ilkacase) oo maanta xafiiskiisa ugu waramayay saxaafadda ayaa sheegay in wasaaradda kalluumaysiga oo ka duulaysa sidii bulshadda looga saari lahaa dhaqaale xumada in ay dadweynaha gaar ahaan ganacsatadda la socodsiinayaan inay awoodda saaraan maal-gashiga kalluumaysiga iyo khayraadka kale ee badda. Iyadoo wasaaraddu qorshe cad u sameeyeen ka faa’iidaysiga kheyraadkaasi qorshayaashaas oo lagu gaadhsiinayo kheyraadka badda mid ku filnaada suuqyada gudaha lana gaadhsiiyo seyladaha caalamka.
Agaasimaha guud oo ka hadlayey siyaabaha lagu dhiirrigelin karo maalgashiga ayaa sheegay in la tababarayo kaluumaysatada, loona samaynayo goobo lagu kaydiyo oo lagu qaboojiyo, lagana caawiyo dhinaca khubarada kaluumaysiga caalamiga ah.
Dhinaca kalena Md. Maxamed Ilkacase waxa uu digniin culus u diray maraakiibta sharcidarada ah ee ka kaluumaysata xeebaha Somaliland, isagoo ballanqaaday in ciidamada xeebaha Somaliland ay heegan ugu jiraan ilaalinta biyo badeedka Somaliland. iyadoo wasaaraddu ka joojisay dhamaan shirkadihii heshiisyada kula jiray Somaliland ee kalluumaysan jiray